Blood Red Sky (2021) - Burmese Subtitle
စကော့တလန်ရဲ့နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ လေတပ်စခန်းတစ်ခုကိုခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးဆိုက်ကပ်ဖို့အသင့်ပြင်နေပြီး မြေပြင်ပေါ်မှာလဲ စစ်သားတွေအဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေရုံတင်မကပဲစနိုက်ပါသမားတွေပါ နေရာချ ပြီးလေယာဉ်ဆီကို ချိန်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် ဒီလေယာဉ်ဟာ သမားရိုးကျ သွားလာဝင်ထွက်နေတဲ့ခရီးစဉ်လေယာဉ်တစ်စီး မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘယ်သူတွေပါလာခဲ့လဲ? သူတို့ဟာ ဘာကြောင့် ဒီလေဆိပ်ကို ဆင်းသက်ခဲ့ရတာလဲ?
တကယ်တော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ နာဒယာဆိုတဲ့ သွေးဝေဒနာသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ သူ့သား အယ်လိယာစ့်တို့ဟာ နယူးယောက်မှာဆေးသွားကုဖို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတာပါ၊ ဒီလိုပဲ အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုတစ်စုဟာ လေယာဉ်ကိုပြန်ပေးဆွဲ အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ဆောင်ဖို့ ပါဝင်လာခဲ့ပေမယ့် သူတို့မသိတာကတော့ နာဒယာဟာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် တစ်ဦး ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။
နာဒယာဘာကြောင့် သွေးစုပ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရလဲ။ ဒီခရီးစဉ်မှာ သူ့ရဲ့ တကယ်တမ်းရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ၊ ဒီပြန်ပေးလူဆိုးတစ်သိုက်လက်ကနေ သားငယ်ကို ကယ်တင်ဖို့ နာဒယာတစ်ယောက်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုပါ ဇာတ်လမ်းထဲမှာအဖြေရှာရပါလိမ့်မယ်။
Blood Red Sky ဟာ သွေးစုပ်ကောင် ဇာတ်လမ်းကိုမှ လေထုထဲမှာ လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာနဲ့ ဆန်းသစ်စွာတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်သည်းဖို ရသကိုရော အက်ရှင်ကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်းခံစားမိစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
IMDb Rating 6.1 34,350 votes
TMDb Rating 7.2 804 votes
Download GDrive 720p 0.93 GB
Download OneDrive 720p 0.93 GB
Download Mega 720p 0.93 GB
Download Mediafire 720p 0.93 GB
Download Usersdrive 720p 0.93 GB
Download Mirrorace 720p 0.93 GB
Download GDrive 1080p2GB
Download OneDrive 1080p2GB
Download Mega 1080p2GB
Download Mediafire 1080p2GB
Download Usersdrive 1080p2GB
Download Mirrorace 1080p2GB